Filoha lefitra ao Myanmar: mila serivisy sy fiarovana tsara ny mpizahatany
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Filoha lefitra ao Myanmar: mila serivisy sy fiarovana tsara ny mpizahatany
Aogositra 4, 2018
Ny filoha lefitra U U U Van Van Thio dia niantso ny fiaraha-miasa amin'ireo fikambanana fizahan-tany mba hampiroborobo ny indostrian'ny fizahantany
Tamin'ny fivorian'ny komity foibe ho an'ny fampandrosoana ny indostrian'ny fizahantany nasionaly ny zoma dia nanantitrantitra ny filana mandray ireo mpizahatany amin'ny serivisy tsara sy fandaminana mba hiarovana azy ireo mandritra ny fotoana ijanonany ary koa ny fampiroboroboana ny fomba amam-panao sy ny sakafo mahazatra ny foko vitsy an'isa ao amin'ny firenena .
Mandritra izany fotoana izany, Myanmar dia nanafaka ny mpitsidika japoney sy korean atsimo ary koa ny fahatongavan'ireo mpitsidika avy any Chine tamin'ny 1 oktobra.
Araka ny tarehimarika ao amin'ny Minisiteran'ny Hotely sy ny fizahantany, nahasarika mpitsidika vahiny maherin'ny 1.72 tapitrisa ny firenena tamin'ny tapany voalohan'ny taona ity.
Mpizahatany 7 tapitrisa mahery no kendren'ny tompon'andraikitra amin'ny taona 2020.
Miezaka ihany koa ny firenena hampiroborobo ny fizahan-tany ara-kolontsaina fizahan-tany sy fizahan-tany miorina amin'ny vondrom-piarahamonina amin'ny faritra manankarena toy ny tontolo ara-tantara, renirano, farihy, morontsiraka, nosy ary ala.
Raha ny antontan'isa dia nahatratra 2.9 tapitrisa ny fahatongavan'ireo mpizahatany teto amin'ny 2016.
Mitady traikefa nahafinaritra? Fifanarahana fivarotana any Paris!
World Tourism Alliance: Anjaran'ny fizahan-tany amin'ny fanampiana ny fahantrana manerantany